သကျတနျ့ခြို: September 2010
အပြောင်းအလဲတိုင်းကို ကြိုဆိုသင့်ပါသလား ? (*****Special Blog Post *****)
၂၁ ရာစုဟာ ဂလို ဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့အညီ အရာရာတိုင်းဟာ ပြောင်းလဲနေလျှက်ရှိပါတယ် ။ အဲဒီအထဲမှာမှ လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ကျန်းမာရေး စသည်တို့ဟာလည်း များစွာပြောင်းလဲလာလျှက်ရှိပါတယ် ။ တစ် နေ့ပြီး တစ်နေ့ ပေါ်လာလိုက်တဲ့ ရောဂါဆန်းတွေ တစ်ခါမှတောင် မတွေ့ဖူး မမြင်ဖူးတဲ့ ရောဂါ သစ်တွေ ကမ္ဘာမှာ တိုးတက်များပြားလာလိုက်တာ ။ SARS မှ အစ H5N1 အဆုံး ပေါ်လာလိုက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကလည်း ခေတ်နဲ့ အညီပါပဲ ။ စီးပွားရေးဈေးကွက်တွေချဲ့ထွင်လာတာနဲ့အမျှ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ယဉ်ကျေး မှုတွေဟာ လည်း ရွှေမြန်မာ တွေဆီကို ကူးစက်လို့ လာခဲ့ပါပြီ ။ လတ်တလော ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်တွေ မြို့ရွာ တွေအတွင်းမှာ “ အိုပါး ” “ မီအာနဲ ” “ ဆားဒါးငယ် ” “ ရှဲရှဲနီ ” “ နီဟောင်မား ” “ သွေ့ဘုချိ” စတဲ့ အသံတွေဟာ အပြောင်း အလဲများရဲ့ ပြယုဉ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခု ဆွေးနွေးလိုတာကတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အပြောင်း အလဲတိုင်းကို ကြိုဆိုသင့်ပါသလား ဆိုတာပါပဲ ။
၁ ။ ကိုရီးယားရုပ်သံဇတ်လမ်းတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဇတ်ကားတွေမှာ မြန်မာစာတမ်းထိုးတာ ကောင်းပါသလား ?
အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့အဆိုးဒွန်တွဲနေတယ် ဆိုသလိုပါပဲ ။ နိုင်ငံခြားဇတ်ကားတွေမှာ မြန်မာစာ တမ်းထိုး တာဟာ မိဘပြည်သူတွေ အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်တယ် ။ ဘာသာစကား ကွာဟမှု အခက်အခဲကို ကျော်လွှား နိုင်တဲ့ အတွက် ဇာတ်လမ်းရဲ့ အနှစ်သာရ ပိုပြီး ပြည့်ဝလာတယ်ပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ လူငယ် လူ ရွယ်တွေ ဘာသာစကား လေ့လာလိုတဲ့လူတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာတမ်းကိုဖျက်ပြီး မြန်မာလို ပြောင်းထား တဲ့အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီးပါပဲ ။ နိုင်ငံခြားကားတွေ ကိုရီးယားဇတ်လမ်းတွဲတွေကိုပါ အင်္ဂလိပ် စာတမ်းထိုးပေးရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာတမ်းကို တဖြည်းဖြည်းလိုက်ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ Reading Skill လည်းတက်လာမှာ အမှန်ပါပဲ ။ နောက်ဆုံး အင်္ဂလိပ်စာကို စိတ်မ၀င်စားတဲ့ ကျောင်းသား လူ ငယ်တွေ တောင် ဇာတ်လမ်းရဲ့ ကျောရိုးကိုသိချင်လို့ အင်္ဂလိပ်စာကို လိုက်ဖတ်တတ်တဲ့ အကျင့် စွဲစေတဲ့ မဟာ အခွင့်အရေး ကြီး တစ်ရပ်ပါ ။ ဒါကြောင့် ဇတ်ကားတိုင်းကို မြန်မာ စာတမ်းထိုးတာထက်စာရင် International Language ဖြစ်တဲ့ English Subtitle ထိုးပေးခြင်းကမြန်မာတွေကို ကမ္ဘာနဲ့အမှီ ရင်ဘောင် တန်းစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ် ။
၂ ။ ဇတ်လမ်းတွေထဲက ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လက်ခံသင့်ပါသလား ?
မင်းသမီးနဲ့ မင်းသားကြိုက် ၊ ဟော်တယ်ရောက် ၊ နောက်တော့ကွဲ ၊ မင်းသမီး ကလပ်တက် ၊ အရက်သောက် နောက် ပျက်ဆီး ၊ ဒါတွေဟာ ဇတ်ကားတိုင်းလိုလိုမှာပါတဲ့ အကြောင်းတရားတွေပါပဲ ။ ကိုရွှေမြန်မာတို့ကလည်း အတုယူ တဲ့နေရာမှာ မြန်ပါဘိသနဲ့ ။ အရွယ်မတိုင်ခင် (၁၈ နှစ်မကျော်ခင်) တည်းခိုခန်းရောက် ၊ ကိုယ်ဝန်တွေရ (အရင်တုန်းကပါ ) ဇတ်လမ်းပေါင်းများစွာပါပဲ ။ အခု အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေး တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Levonorgestrel 0.75mg ဆေးတွေ မြန်မာပြည်ကို ၀င်ရောက်လာတာဟာ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် ကိုယ်ဝန် မရနိုင် အောင်တားပေးတာ မှန်ပေမယ့် တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ ကြောက်မက်ဖွယ် အန္တရာယ်ဆိုးကြီးပါပဲ ။ လူငယ်တွေက ငါတို့ အတူတူနေလိုက်ကြမယ်ကွာ ဘာဖြစ်လဲ အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးရှိနေတာပဲ ဆိုပြီး Sex ကိစ္စကို လွယ်လွယ်လေး စဉ်စားလာကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် ။ တခြားနိုင်ငံတွေအတွက် မထူးပေမယ့် ယဉ် ကျေးမှု ဂါရ၀တရား ထွန်းကားတဲ့ ရွှေမြန်မာအတွက်တော့ ၁၆ နှစ် ၁၇ နှစ်အရွယ်လေးတွေ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးလာဝယ်ကြတာတွေ့တိုင်း ဒါဟာ တို့ နိုင်ငံအတွက် မအပ်စပ်လှဘူးလို့ပဲ ထင်မိပါတယ် ။ သူတို့လေးတွေ ဒီကိစ္စအတွက် ကျွန်တော့်ကို လာတိုင်ပင်တဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ခု ပျောက် ရှသွားသလို ၊ နှမျောတသမိသလို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ် ။
ငါ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေ မှားယွင်းပြီးတာတောင် နောင်တရဟန်မရှိပဲ အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးအကြောင်း ပွင့် ပွင့် လင်း လင်းမေးရဲတဲ့သတ္တိကို ချီးကျူးပဲချီးကျူးရမလား ၊ အံ့ပဲအံ့သြရမလား မတွေးတတ်တော့ပါဘူး ။ တ ခါတ ခါလည်း အော်..ငါတို့နိုင်ငံမှာ Sex ဟာ ဒီလောက်တောင်လွယ်ကူပွင့်လင်းနေကြပြီလားလို့လည်း တွေးမိပါတယ် ။ ဒါတွေဟာလည်း အပြောင်းအလဲတွေထဲက ကြိုဆိုသင့်ပါသလား ၊ ပယ်ချသင့်ပါသလား ။
၃ ။ လက်မထပ်ပဲအတူနေခြင်း Living Together ကို ကြိုဆိုသင့်ပါသလား ?
Hip Hop ဂီတတိုးတက်လာခြင်း ၊ လူငယ်လေးတွေ အထူသဖြင့် ယောင်္ကျားလေးတွေ လက်သည်းတွေမှာ အမည်း ရောင်ဆိုးခြင်း (Punk သင်္ကေတ ) ၊ နားကပ်ဝတ်ဆင်ခြင်း စတာတွေကတော့ ရိုးအီနေပြီး ရွှေမြန်မာ တွေအတွက် အသားကျနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ထူးပြီး ပြောမနေတော့ပါဘူး ။ ပြောလိုတာကတော့ နိုက်ကလပ် တွေပါပဲ ။ မတော်တဆ ခဏတာ အသဲကွဲခြင်း ၊ စိတ်ညစ်ခြင်း တို့ကြောင့် ကျောင်းသားလူငယ်တွေ နိုက်က လပ် တတ် ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ သတင်းတွေလည်း ကြားရပေါင်းများနေပါပြီ ။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ နိုက်က လပ်က အပြန် ဟော်တယ်တွေမှာ Living Together နေမိတဲ့အဖြစ်တွေပါပဲ ။
၂ ဖက်လုံးသဘောတူပြီး အရာရာ ok နေရင် နိဗ္ဗာန်ဘုံပဲပေါ့ ။ တစ်ယောက်ယောက်က ဖောက်ပြီဆိုရင်တော့ “ နင်ယောင်္ကျားမပီသဘူး ” “ နင်ငါ့ကို တာဝန်မယူဘူး ”“ နင်စားပြီး နားမလည်ဘူးလား ” “ ယောင်္ကျားမပီသဘူး ” “ နှမချင်းမစားနာဘူး နင့်နှမဆိုရင် နင်အဲဒီလိုနေမလား ” ဆိုပြီး မိန်းကလေးတွေဖက်စွပ်စွဲသလို ယောင်္ကျား လေး တွေ ဖက်ကလည်း “ အို..နင်သဘောတူလို့ ဖြစ်တာပဲ ” “ နင့်ကို လက်ထပ်ပါ့မယ် ဘယ်တုန်းက အာမခံဘူးလို့လည်း ” “ ဒီတစ်ညလေးအိပ်ယုံနဲ့ နင့်ကို ငါက ယူရမလား ” “ လက်ခုပ်ဆိုတာ ၂ ဖက်တီးမှ မြည် တာ ပါကွာ ” စသဖြင့် ဆင်ခြေတွေပေးတတ်ကြပါတယ် ။ တကယ်တမ်း နစ်နာတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ ။ မိန်း ကလေး တစ်ဦးတည်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ် ။
အပျိုစင်ဘ၀ ( Virgin ) ကိုလည်းဆုံးရှုံးရသေး ၊ တာဝန်လည်းမယူ အခန့်မသင့်ရင် ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ ကျန်ခဲ့ရ မယ့် ကိစ္စ ။ ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သာ သုတ်ပေရော့ ။ ဒါကြောင့်ကို ယောင်္ကျားတို့ သတိထားဆင်ခြင်ပြီး ငါ့နှမသာဆိုရင် ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတွေ ထားကြမယ်ဆိုရင် ပွင့်သောပန်းတိုင်းမွှေးနေမှာ အမှန်ပါပဲ ။ ဒီကိစ္စဟာ ဆွေးနွေး ရမယ်ဆိုရင် နက်နဲကျယ်ပြန့်လွန်းပါတယ် ။ လူမှာ အဓိကခွဲရင် Love နဲ့ sex ကို အတူတူပဲ Sex မပါပဲLove မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့လူမျိုးနဲ့ love နဲ့ sex တခြားစီ ၊ အချစ်ဆိုတာ အေးမြဖြူစင် နူးညံ့တဲ့ ရင်ခုန်သံဖြစ်ပြီး Sex ကတော့ သွေးသားအလိုဆန္ဒ ရမ္မက်လို့ ခံယူထားသူဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ် ။ ဒုတိယအမျိုးအတွက် ဘာမှ ပြဿနာ မရှိလှပါဘူး ။
Love နဲ့ Sex အတူတူပဲလို့ လက်ခံထားတဲ့သူတွေအတွက် အထူးသဖြင့် ယောင်္ကျားလေးတွေက “ နင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ငါ့ကို မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် နင်ငါ့ကို တကယ်မချစ်လို့ပဲ ” “ နင့်ကို တကယ်ချစ်တာပါဟာ နင်နဲ့ အတူနေချင်လို့ပါ င့ါကို မလိုက်လျောပေးနိုင်ဘူးလားဟင် ” စသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့သွေးသားဆန္ဒတပ်မက်မှုကို အချစ် လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့ကာမကို ရယူဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မှာချင်တာ က မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ စိတ် အနေအထားကို သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ယောင်္ကျားလေး အများစု ( အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) တစ်ခုခုကို လိုချင်ပြီဆိုရင် အသည်းအသန်ကြိုးစားပြီး တကယ်တမ်းလက်ထဲ ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ ရိုးအီသွားတတ်ကြပါတယ် ။ မိန်းကလေးရဲ့ အပျိုစင်ကိုရယူပြီးတကယ်လည်းရရော လက်မှမထပ်ရသေးတာပဲ ဆိုပြီး တခြားတစ်ယောက်ကို ပြောင်းဖို့ ၀န်မလေးတတ်ကြပါဘူး ။ ဖတ်ဖူးတဲ့ ရှေးစာအုပ် တွေအရ ကျားဆိုတဲ့ သဘာဝဟာ ဘယ်တော့မှ မိန်းမတစ်ဦးနဲ့ တင်းတိမ်လေ့မရှိဘူးတဲ့ ။ ကြောက် စရာကြီးပါ ။
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားကို လိုရာ ပုံသွင်းနိုင်တာဟာလည်း အရည်အချင်းတစ်ခုပါပဲ ။ ဒါ ကြောင့် ကာမပေးပြီးမှ အပိုင်ချည်မယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်စွဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ငါသူ့ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ သူယုံသွား မယ် စတဲ့ အတွေးတွေကို ဖယ်ထုတ်စေချင်ပါတယ် ။ နစ်နာရင် ၂ ဖက်စလုံး နစ်နာပြီး မိန်းကလေးက ပိုနစ်နာပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ယောင်္ကျားတိုင်းလည်းမကောင်းသလို မိန်းမတိုင်းလည်း မကောင်းပါဘူး ။ အခြေအ နေ ၃ ခုကို တင်ပြရမယ်ဆိုရင်
၁ ။ ယောင်္ကျားပျက်နဲ့ မိန်းမပျက် တွေ့ဆုံခြင်း
ဒါကတော့ ပြဿနာ သိပ်မရှိလှပါဘူး ။ နှစ်ယောက်လုံးက sex ကို အလေးမထားတဲ့အတွက် living together နေ ကြတယ် ။ သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်လည်း အေးအေးဆေးဆေးပဲ လမ်းခွဲလိုက်ပြီး အသစ်ရှာယုံပါပဲ ။
၂ ။ ယောင်္ကျားကောင်းနဲ့ မိန်းမပျက် တွေ့ ဆုံခြင်း
ပညာရေးတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရွှေရောင်အနာဂါတ်တွေနဲ့ ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက် ဟာ မိန်းမလည် မိန်းမပျက်တစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံမိပြီဆိုရင်တော့မလွယ်လှပါဘူး ။ မိန်းမပျက်ရဲ့ မာယာ ကျော့ကွင်း တွေအောက် သက်ဆင်းပြီး ဘ၀ ပျက်သွားနိုင်ပါတယ် ။ တစ်ညတာ အိပ်စက်ပြီး တစ်ဘ၀တာ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုပြီး အပိုင် ချည် တတ်ကြပါတယ် ။ ဒါမျိုးဆို ရင် ယောင်္ကျားကောင်းတော့ နစ်နာပြီး ဘ၀ ဟာ အဖတ်ဆယ် မရ တော့ ဘူးလို့ သာ မှတ်ပေတော့ ။
၃ ။ ယောင်္ကျားပျက်နဲ မိန်းမကောင်းတွေ့ဆုံခြင်း
ရိုးသားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ယောင်္ကျားပျက်တစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံမိပြီဆိုရင်တော့ ဆုံးရှုံးရမှာတွေကတော့ အများ ကြီးပါပဲ ။ ကိုယ့်ရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀သာမက တခြား စိတ်ဓါတ်ရေးရာတွေနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ် ၀န်ပြ ဿနာ တွေကိုပါ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ် ။
ဘယ်သူမပြုမိမိ မှု ဆိုသလိုပါပဲ ။ ကိုယ် အားနာလိုက်မိလို့ ၊ လိုက်လျောလိုက်မိလို့ ၊ အယုံလွယ်လိုက်မိလို့ ၊ မချစ်ဘူး လို့ ထင်မှာစိုးလို့ စတာတွေကြောင့် ဘ၀ပျက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ ။ မတော်တဆ ကိုယ်ဝန် တွေဘာတွေ ရလာရင်လည်း ဖျက်ကြဖို့အထိ ကြံစည်တတ်ကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မမှားခင်က ရှောင်နိုင် ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ ။ ကဲ..ဒါဆို မှားပြီးပြီ ဘာဆက်လုပ်ကြမလည်း ဆိုတဲ့ ပြဿနာကိုလည်း ခေါင်းအေး အေး ထားပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ် ။ ကိုယ်သည် မရှောင်နိုင်လို့ လိုက်လျောတော့မယ်ဆိုရင် ချစ်သူရည်းစားကို condom သုံးခိုင်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ။
သူမသုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ်ဝန်မရအောင် သန္ဓေတား ကာကွယ်နည်း တစ်ခုခုကို ကိုယ်က သုံးထားပါတယ် ။ တစ်ကြိမ် တစ်ခါ အတွက်တော့ အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးတွေက ကောင်းကောင်းကြီးဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ် ။ Composition က Levonorgestrel 0.75 mg ပါဝင်ပြီး သူ့ ရဲ့စွမ်းအင်လေးတွေကို ဗဟု သုတအနေနဲ့ပြောရရင် ဒီဆေးက လိင်ဆက်ဆံပြီးချင်း ၇၂ နာရီ အတွင်းသောက်ရတာဖြစ်ပါတယ် ။ မိန်းကမလေးတွေမှာ မျိုးဥကြွေခြင်းကို တားဆီးပေး ခြင်း (Ovulation)၊ အကယ်၍ ဖို သုတ်ကောင် sperm နဲ့ ထိတွေ့မိပါက Fertilization မျိုးအောင်ခြင်းကို တားဆီးပေးခြင်း ၊ အကယ်၍ မျိုးအောင်သွားပါကလည်း သန္ဓေတွယ်ခြင်း Implantation ကိုတားဆီးပေးခြင်း စတဲ့ Action တွေရှိပါတယ် ။ ယောင်္ကျားလေးတွေမှာတော့ Sperm count သုတ်ကောင်အရေအတွက်ကိုနည်းစေခြင်း နဲ့ သေစေခြင်း စတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် ။ ပထမ ဆေးသောက်ပြီး နောက် ၁၂ နာရီကြာတဲ့အခါ နောက်ဆေးကို သောက်ဖို့လိုပါတယ် ။ ပြန်အန်ခဲ့ရင်တော့ ပြန်သောက် ပေါ့ ။ ဒါက အရေးပေါ်တစ်ကြိမ်တစ်ခါအတွက်ပါ ။ ကွန်ဒုံးမသုံးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ မှားလိုသူတွေကတော့ သုံးလခံဆေး Depo injection ထိုးထားရင်ထိုး မဟုတ်ရင်တော့ OC Pills လို့ခေါ် တဲ့ မြှားထိုးတဲ့ကဒ်လေးတွေသောက်ဖို့လိုပါတယ် ။
ကွန်ဒုံးကတော့ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီး ပေးနိုင်တဲ့အပြင် တခြား လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေ (Sexually Transmitted Diseases) တွေကိုလည်း တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ် ။ ကဲ ထားပါတော့ ကိုယ်ဝန်ရတဲ့အဆင့်ကို ရသွားပြီဆိုပါတော့ ။ ဒါဆိုရင် တော့ အရေးကြီးလာပါပြီ ။ ကိုယ်နဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူက သစ္စာရှိတယ်ဆိုတော်ပါသေးရဲ့ ။ တာဝန် ယူနိုင်သေးတယ် ။ အဲ့ ပေါ့ပေါ့ပျက်ပျက်ကောင် မလေးမထားတဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးဘ၀ ပျက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ တချို့က ဒါကို ပြုမှုခဲ့တဲ့ ယောင်္ကျားလေးကိုတော့ အပစ်မတင်ပဲ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချဖို့ မိုက်မိုက်မဲမဲ ကြံစည်တတ်ကြပါသေးတယ် ။နည်းမျိုးစုံနဲ့ပေါ့ ။ ဒါဆို ကိုယ်ဝန်ရလာရင် ဘာလုပ်ရမလည်း ဆိုရင်တော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးလိုက်ပါ ။ အမှန်တော့ ကြားဖူးတာ တစ်ခုရှိပါတယ် ။
“ ပြင်ဆင်ထားခြင်း မရှိပဲ ဧည့်သည်ကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဟာ အိမ်ရှင်တာဝန်မကျေဘူး ” တဲ့ ။ အခု လိုရုတ် တရက် ပြင်ဆင်ချိန်မရှိပဲ ဧည့်သည်ကို လက်ခံလိုက်ရတာဟာ အိမ်ပေါက်ဝကနေဆီးပြီး ရင်ဝကို လှံနဲ့ ထိုးတာ ထက်စာရင်တော့အ များကြီးတော်ပါသေးတယ် ။
၂၁ ရာစုရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေထဲမှာ လက်ခံသင့်တာတွေရှိသလို လက်မခံသင့်တာတွေလည်း တပုံကြီး ရှိနေပါသေးတယ် ။ အထူးသဖြင့် ဒီနေ့လို ခေတ်ကြီး အရာရာကို အလွယ်တကူရနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ Abortion (ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း) ဆိုတာဟာလည်း မရှိသင့်တော့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ညီငယ်ညီ မငယ် လေးတွေရေ... ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲဘာတွေကာကွယ်ကြမှာလဲဘာတွေပြင်ဆင်ကြမှာပါလဲ။ တတ်သိနား လည် တဲ့ လူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ကြပါ ။ မိန်းကလေးတွေဘ၀ဟာ ပန်းကလေးတွေလိုပါပဲ ။ အချိန်မတိုင်ခင် နွမ်းသွား ပြီဆိုရင် တော့ စွန့်ပစ်ခံရဖို့ နီးစပ် လာပြီဖြစ်ပါတယ် ။ ပန်းကလေးတွေ မနွမ်းစေဖို့ ပန်းကိုင်ဥယျာဉ်မှူး တွေက လည်း ပန်းကလေးတွေကို မြတ်နိုးတတ်ဖို့လိုပါတယ် ။ ချစ်ခင်ကြပါ ။ ယုယကြပါ ။ နှမချင်းစာနာပြီး တန်ဖိုး ထားပေးကြပါ ။
ပွင့်သောပန်းတိုင်း မွှေးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ ။
(ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...ဖတ်သွားပါတယ် စတဲ့ ယေဘူယျဆန်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေထက် သင်ရဲ့ခံယူချက်ကရော ဘာ လည်းသိချင်ပါတယ် ။ သင်သာဆိုရင်ရော ဘယ်အယူအဆတွေ ပြောင်းလဲမှုတွေကို လက်ခံပြီး ဘယ်ဟာ တွေကိုတော့ လက်မခံဘူးစတာတွေကို အကျယ်တ၀င့်ဆွေးနွေးစေလိုပါတယ် )
Posted by သက်တန့်ချို at 10:34 AM 19 comments:
အသက်ဆယ့်လေးနှစ်အရွယ် Elisany Silva ဟာ အရပ် ၂.၀၆ မီတာ ( ၆ ပေ ၉ လက်မ) ရှိပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ Brazilian Amazon State of Para မှာ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ Elisany ဟာ ကမ္ဘာ့အရပ်အရှည်ဆုံး ဆယ်ကျော်သက်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းထွက်ဖို့ ဖိအားပေးခြင်းခံနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျောင်းကားကို စီးဖို့ သူမအရပ်က ရှည်လွန်း နေတာရယ် ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုသူမဟာ ဖက်ရှင်မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အိပ်မက်တွေ မက်ခွင့်ရှိနေပါပြီ ။
Elisany Silva နဲ့ သူမရဲ့ ညီမတွေဖြစ်တဲ့ Talicia ၊ Eliza တို့ Braganca မှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ဦးနဲ့စကား ပြောနေပုံပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:25 PM6comments:
ပါရူးနိုင်ငံမှ Amazonian တောနက်ထဲမှာ ဇွန်းပုံသဏ္ဍာန် သွားတွေနဲ့ သစ်သားတွေကို စားသောက်တတ်တဲ့ ထူး ဆန်းတဲ့ ငါးတစ်မျိုးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။
US National Science Foundation မှ သိပ္ပံပညာရှင်များက လွန်ခဲ့တဲ့လက Northeastern Peru မှ Alto Purus ဧရိယာမှာ စူးစမ်းရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ သစ်ပင်ကသစ်သားတွေကို ကိုက်ဖဲ့စားသောက်တဲ့ ဒီငါးဟာ ၇၀ စင်တီမီတာ ( ၂ ပေ သုံးလက်မရှည်ပြီး) ဇွန်းပုံသဏ္ဍာန် သွားတွေပါပြီး မြစ်ထဲ မှာမျောပါလာတဲ့ သစ်တုံး တွေကို ကိုကိုက်ဖဲ့စားသောက်ပါတယ် ။
ဒေသခံလူတွေကတော့ ဒီငါးကို ဖမ်းယူပြီးစားသောက်နေခဲ့ကြတာတော့ကြာပြီဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ရေထဲမှာ မှိန်းနဲ့ ထိုးပြီး ဖမ်းယူကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ပညာရှင်တွေ လေ့လာဖို့ ဖမ်းယူခဲ့တဲ့ ပထမ ဆုံးငါး အရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ Harvard University မှ သတ္တဗေဒပညာရှင်Paulo Petry က ဒီငါးဟာ ဇီဝ နည်းအရကြည့်ရင် ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့ ခက်ခဲတဲ့ နေရာတွေမှာ ပေါက်ဖွားလာရတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဒီငါးအရှင်က နေ တစ်ရှူးနမူနာကိုယူပြီး လေ့လာမှုတွေဆက်လုပ်နေပါသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
" တကယ်တော့ ဒီငါးမျိုးဟာ ဖမ်းဖို့အလွန်ခက်တဲ့အကောင်တွေပါ သူတို့ကို ခင်ဗျားဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ လှောင် အိမ်လို ဇကာလို မျိုးနဲ့ဖမ်းရင်ဖမ်းဒါမှမဟုတ် မှိန်းနဲ့ အသေသတ်ပြီးမှ ဖမ်းလို့ရပါမယ် သူတို့က သစ်သား တွေကို စားတဲ့အတွက် ငါးမျှားတံနဲ့ ထောင်ဖမ်းဖို့တော့ ခင်ဗျား မစဉ်းစားပါနဲ့ "
Posted by သက်တန့်ချို at 12:20 PM5comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 12:06 PM6comments:
အလွန်ကို ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ရင်ခုန်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဒီရိုလာကိုစတာဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ Fujiyoshida , Shizuoka မှာတည်ရှိပါတယ် ။
ပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုး အကြိမ်အရေအတွက် - ၁၄ ကြိမ် (ကမ္ဘာ့ဂရင်းနစ်စံချိန်)
အမြန်ဆုံးအရှိန် - တစ်နာရီ ၁၂၆ ကီလိုမီတာ
လှေကားအမြင့် - ၇၆ မီတာ
မတ်စောက် ထောင့်ချိုး - ၈၉ ဒီဂရီ
လမ်းကြောင်းအရှည် - ၁၁၅၃ မီတာ
ဒီလို အမြင့်ကြီးကိုစီးရမှာနော် ...။
ဇောက်ထိုးကြီးတော့ဆင်းလာပါပြီ ကြောက်တတ်သူများ ဖက်ထားကြပါ (ဘေးကလူကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး လက်ကိုင်တန်းတွေကိုပြောတာပါ)
တကယ့်ကိုသည်းထိတ်ရင်ဖိုစရာ ကြီးပါပဲ ။ အော်ဆန်းပါပေ့ ရိုလာကိုစတာရယ် ။
တွဲလောင်းလေးတွေ တွဲလောင်းလေးတွေ မြဲမြဲသာကိုင်ထားကြဝေ့ ။
ဒီလို သည်းထိတ်ရင်ဖို စွန့်စားခန်းတွေကို ကြုံတွေ့ရမှာပါ
ဒီဂရီမတ်စောက်ကြီးကို အရှိန်နဲ့ အသည်းအေးဖွယ် လှိမ့်ဆင်းရမှာ နော် ။
ဇောက်ထိုးတွေ မိုးမျှော်တွေအကုန်ပါတယ်နော် ဂါဝန်တွေ စကတ်တွေ မ၀တ်လာပါစေနဲ့ ။ အကုန်လုံး ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ကြမယ် ။
ဘေးစောင်းတန်းကြီးနော် လွင့်သာကျလိုက်လို့ကတော့ကွာ နှလုံးတောင် အဲလေ နှလုံးခုန်တောင်ရပ်သွားမယ်
တွန့်လိန်ကောက်ကွေးတဲ့ ရိုလာကိုစတာ အရူးအမူးကို နှစ်သက်သူတွေ ရင်ခုန်စွန့်စားသူတွေ အတွက် အကိုက်ပါပဲ ( နှလုံးရောဂါရှိသူတွေကတော့ ထိုင်သာကြည့်နေပေတော့ )
Posted by သက်တန့်ချို at 3:08 PM3comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:49 AM No comments:
အဖျားကနေ အရှည်အထိကို ၄၇ လက်မ(၁၁၉ စင်တီမီတာ ) ရှည်လျှားပြီး အလွန်ကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး သခွားသီးကြီးဖြစ်ပါတယ် ။ ပိုင်ရှင်ကတော့ Mr နဲ့ Mrs Pearce တို့ ဇနီးမောင်နှံပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 10:48 AM3comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 2:56 PM 16 comments:
ဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကုန်ကျမှုအများဆုံးနဲ့ အကြီးမားဆုံး water fountain ဖြစ်ပါတယ် ။ Burj Dubai Lake မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ အရှည်က ပေ ၉၀၀ ကျော်ရှည်လျှားပြီး အမြင့်ကတော့ ပေ၅၀၀ အထိ ရေပန်းတက်နိုင်ပါတယ် ။ ဒီ fountain ဟာ ရေ ၂၂၀၀၀ ဂါလန်ကို လေပေါ်မှာ ပင့်တင်ထားပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒီအံ့သြဖွယ်ရာ ပုံရိပ်တွေနဲ့ ကနေတဲ့ ရေလွှာလေးတွေကို ဖန်တီးဖို့ မီးလုံးပေါင်း ၆၀၀၀ နဲ့ color projector ၂၅ ခု နဲ့ ပံ့ပိုးပေးထားရပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 10:39 AM 1 comment: